Maalinta: Diseembar 22, 2016
Ha moogaanin Fursadda Shahaadada Dibloomada ee leh Fogaanta Waxabarashada: Barnaamijyada Waxbarshada ee Beeraha Beykoz waxay bixiyaan “Saadka” iyo “Ganacsiga Dibadda ş wuxuu siiyaa fursad ay ku helaan diblooma iyaga oo aan shaqooyinkooda ka tegin. Ku dar shahaadada guusha ganacsigaaga [More ...]
Gaadiidka Dalxiiska ee degmada Erzurum wuxuu ku yaal magaalada Bursa
Gawaarida Dalxiiska Dowlada Hoose ee Magaalada Erzurum ee Magaalada Bursa: Erzurum Dalxiiska Dowlada Hoose ee Dalxiiska Truck, ayaa nasiino ku siiyay Bursa. Konya, Antalya iyo Bursa kadib baabuurkii dalxiiska ayaa shacabka kula kulmay fagaaraha Magaalada. toban [More ...]
Qarax ka dhacay saldhigga tareenka ee magaalada Moscow
Qarax ka dhacay xarunta metrooga ee Moscow: Qarax aad u weyn ayaa ka dhacay albaabka laga soo galo xarunta metrooga ee Kolomenskaya ee magaalada Moscow, Russia. Dabka ka dhashay qaraxa ayaa sidoo kale laga arkayay wadada. Sida laga soo xigtay gaaska wakaaladda TASS ee Ruushka [More ...]
Siyonistayaasha waxay diideen caawimaadda jidka tareenka ee Hejaz
Caawiyaada Sahroziyada ee Wadada Tareenka ee la Diiday: Laba dukumiinti oo laga helay kaydadka Ottoman, gargaarka 200 pound oo uu soo diray Herzl, aasaasaha Zionism, ee wadada tareenka ee Hejaz, wuxuu shaqsi ahaan u ahaa Sultan 2. Wuxuu muujiyey in uu diiday amarka Abdulhamid [More ...]
Tareen ku yaal Shiinaha wuxuu gaardiyay baabuurta heer goyn
Tareen ku yaal Shiinaha wuxuu gaardhiyey baabuurta heer goynaya: Shiinaha gudaheeda, tareenku wuxuu ku dhacay meesha lagusoo qaado iyo jaangooyo ka gudbaya heerka isgoyska. Darawalka gawaarida xamuulka qaada ayaa ka badbaaday shilka, halka jiibta hore ee tareenka uu jiitay mitir. [More ...]
Qandaraaska Qashinka Dib Loo Qaadiyay
Tilmaanta Gawaarida Motaş Rotary Line: Shirkadda Gaadiidka Dadweynaha ee Magaala Weyn ee MOTAŞ waxay qabanqaabineysaa hindise gawaadhi ah 8 kaasoo si ka duwan uga shaqeyn doona khadadka. Si loo kordhiyo raaxada ee gaadiidka dadweynaha, rakaabku waxay rabaan inay bartaan bartanka waqti gaaban [More ...]
RayHaber 22.12.2016 Warbixinta Shirka
Adeegga shaqaalaha ayaa la qaadayaa (Martida / Marti geliyaha iyo Xamuulka) Isugeynta Heerka iyo Adeegga Ilaalada Wadooyinka ayaa la qaadi doonaa Dhismaha Dhismaha waxaa la sameyn doonaa MT 15000 halka MT 30000 DMU la iibsan doono Cirka Hawada (TÜVASAŞ) [More ...]
Buundada Yavuz Sultan Selim iyo Wadada Wadada Weyn Diyaargarowga Xilliga Jiilaalka: 26 Diyaargarowga bilaha jiilaalka ayaa lagu dhammeeyaa Buundada Yavuz Sultan Selim iyo Wadada Wadada Weyn ee Waqooyiga oo la furay bishii Agoosto. Masuul ka ah ganacsiga [More ...]
Isgoysyada Gawaarida Eurasian Tunnel ayaa bilaabatay saaka: Dadka degan magaalada Istanbul waxay bilaabeen inay adeegsadaan Eurasia Tunnel ilaa iyo saaka. Aasiya iyo Yurub markii ugu horreysay, oo salka dhulka hoostiisa ah leh laba dabaq oo leh waddo dhaadheer oo waaweyn [More ...]
Qeybta Saadka waxay u baahan tahay suuqyo tayo sarre leh
Boorar tayo leh oo loogu tala galay waaxda saadka: Boolal Tayo leh oo ay soo bandhigtay CHEP, hogaamiyaha aduunka ee howlaha tixgelinta qalabka, wanaajinta howlgalada saadka. Taleefannadan caalamiga ah waxay ka hortagaan shilalka dhici kara iyo [More ...]
Weerarkii Mashruuca Qarniga ee ka socda Degmooyinka Magaalada Izmir: Magaalada 2017, Magaalada Izmir ee Magaalo Weynaha waxay bilaabi doonaan mashruucyo badan oo muhiim ah oo xallin u ah dhibaatada wadooyinka iyo gaadiidka ee magaalada. Maalgalinta ka mid ah diyaarinta, ugu badan [More ...]
Waddada tareenka nidaamka tareenka ee maraya degmada 7 ee Istanbul
Wadada khadka tareenka ee ka gudbi doona degmada 7 ee magaalada Istanbul ayaa la soo saaray: Waxaa la qorsheeyay in la sameeyo inta u dhexeysa degmooyinka Küçükçekmece-Çatalca iyo Arnavutköy-Çatalca-Büyükçekmece-Esenyurt - Avcılar-Küçükçekmece-Başakşehir. [More ...]
TÜDEMSAŞ qoridda qalin dugsiga sare shaqaalaha joogtada ah samaynayaan 20: Turkey Railway Machines Industry Inc. Agaasinka guud ee TÜDEMSAŞ wuxuu shaaciyey in shaqaalaysiinta shaqaalaha 20 shaqaalaha dadweynaha ka qalin jabisay dugsiga sare. Xilliga kama dambeysta ah ee loo yaqaan '30' [More ...]
Ogeysiiska Qandaraaska: Qalabka wagon ayaa la iibsan doonaa (TÜLOMSAŞ)
Turkey tareenka iyo Engine Industry Inc. Waxyaabaha loo yaqaan 'Wagon' ayaa la iibsan doonaa iyadoo la raacayo QODOBKA NATIIJADA IYO ISSUESKA LA XIDHIIDH KU SAABSAN QODOBKA 1- Macluumaadka ku Saabsanaanta Qandaraaska 1.1. Maamulka; a) Magaca: Qandaraasluhu, Turkey tareenka iyo [More ...]